Howlgallo lagu raadinayo dadkii huriyay muddaaharaadyadii Mtwara - Sabahionline.com
Howlgallo lagu raadinayo dadkii huriyay muddaaharaadyadii Mtwara
Maajo 27, 2013
Bilayska ayaa raadinaya dadkii qaybiyay waraaqaha iyo farriimaha telefoonnada ee xambaarsanaa hanjabaadaha wax yar ka hor dibad-baxyadii rabshadaha watay ee Mtwara ka dhacay todobaadkii hore, sidaana waxa Isniintii (27-kii Maajo) sheegay Daily News-ka Tansaaniya.
Xukuumadda Tansaaniya oo sheegtay in heshiis laga gaaray dhuuntii la dhigi lahaa Mtwara
Dadka Mtwara oo looga digay in rabshaduhu wiiqi doonaan horumarka
Bilayska ayaa sheegay in waraaqo iyo fariimo telefoon oo loogu hanjabaya qof alla iyo qofkii aan ka qayb-qaadan dibad-baxa looga soo horjeedo dhuunta gaaska ee ka imanaysa Mtwara tagaysana Daarusalaam ayaa laga yaabaa in ay si toos ah ugu lug lahaayeen rabshadaha.
"Wax howlo ah oo la qaban karo 15-ka Maajo ma jiraan qof alla iyo qofkii ka horyimaada dibad-baxana waa la weerarayaa," ayaa lagu qoray farriimaha.
Guddoomiyaha Gobolka Mtwara Joseph Simbakalia, oo ah madaxa guddiga difaaca iyo ammaanka gobolka, ayaa sheegay in bilaysku ay daba-joogaan hal qof oo lagu tuhunsan yahay in uu waraaqaha ku soo daabacay meel dibadda ka ah Mtwara. "Xukuumaddu waxa ay ku tallaabsan doontaa waxii karaankeed ah sidii looga guulaysan lahaa canaasiirtaas," ayuu yiri.
Guddi-howleed ka tirsan Ciidanka bilayska ayaa sidoo kale laga keenay Daarusalaam si loo baaro eedeeyn sheegaysa in ciidanka bilaysku uu awood ka badbadis ah u isticmaalay muddaaharaadayaasha.
May 28, 2013 @ 06:45:09AM
Si nabadgalyo loogu noolaado, waa in dambiilayaashaas lasoo qabtaa oo jeelka la dhigaa.